कांग्रेस हारबारे जिल्लाको रिपोर्ट: नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न नसक्नु, क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नैपर्ने ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कांग्रेस हारबारे जिल्लाको रिपोर्ट: नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न नसक्नु, क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नैपर्ने !
प्रकाशित मिति ९ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०८:०० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित हार बेहोरेपछि आन्तरिक किचलोमा फसेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी समीक्षा सुरू गर्दैछ । चुनावी समीक्षाका लागि कांग्रेसले शुक्रबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
चुनाव सकिएको करिब ५ महिनापछि कांग्रेसले हारको समीक्षा गर्न लागेको हो । निर्वाचनमा भोग्नुपरेको पराजयको कारणहरु सच्याएर पार्टीलाई आगामी दिनमा मजबुत बनाउने राणनीति तयार गर्न कांग्रेसले चुनावी समीक्षा सुरु गरेको जनाएको छ ।
पार्टीभित्र निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर चुनावी समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठे पनि शुक्रबारबाट मात्रै कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा चुनावी समीक्षा सुरु गर्न लागेको छ ।
सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा चुनावी समीक्षा सुरु हुने कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा घनीभूत रुपमा चुनावी समीक्षा गरेर पार्टीलाई मजबुत बनाउने रणनीति तयार गर्ने पनि जानकारी दिए ।
कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई जिल्लास्तरको चुनावी समीक्षा र सुझाव माग गरेको थियो । शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअगावै जिल्लास्तरीय चुनावी समिक्षा र सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउन जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई परिपत्र गरिएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म ३० जिल्लाले मात्रै केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
अशक्त साहारा बिहिन र एकल महिलालाइ प्राधिकरणले आभास निर्माण गरिदिने
काभ्रे । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन नसक्नेलाई आफैँले घर बनाइदिने…
पब्जीको लतले टुट्यो घरबार, श्रीमतीले छोडेर गइन्
काठमाडौं । अन्लाइन मोबाइल गेम पब्जी लोकप्रिय हुनुका साथै विवादित पनि छ । यसले गर्दा कैयौं मानिस मरेका छन्…
५ वटा ब्रुमर थप्दै कामपा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाका सडक सफा गर्न थप पाँच वटा ब्रुमर थप गर्ने भएको छ । सडक पखाल्नका…
१६ हजार अश्लील वेबसाइट बन्द
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यौनजन्य अश्लील सामग्री राख्ने १६ हजारभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गराएको छ । दूरसञ्चार सेवा…
ढुंगाले हानेर अर्धचेत पारी युवती बलात्कार गर्ने तीन जेल
काठमाडौं । युवतीलाई ढंगाले हानेर बेहोस बनाएपछि सामूहिक बलात्कार गर्ने तीन अभियुक्तलाई घटनाको १५ महिनापछि जिल्ला अदालत ललितपुरले दोषी…